हाजार्डको मूल्य ४०० मिलियन !! हाजार्डको यो मूल्यको कारण के के ? - Experience Best News from Nepal
हाजार्डको मूल्य ४०० मिलियन !! हाजार्डको यो मूल्यको कारण के के ?
फुटबल फिचर :
– रसिया विश्वकप २०१८ का स्लिबर बलका बिजेता र साथै विश्वकप २०१८ का ब्रोंज़ मेडलदाता, बेल्जियम विश्वकप २०१८ मा तेस्रो स्थान लिन सफल बनेको थियो ।
– फिफाका उत्कृस्ट खेलाडीको चयनमा मनोनित
– के थिए कारण जसले हाजार्डलाइ यो स्थानसम्म ल्याई पुर्यायो
खेलाडीमा भएको एक हुनर र दक्षता कहिँ कतैबात झल्किनै हाल्छ र कुनै न कुनै समयमा त्यसको प्रभाव परि छाड्छ, यस्तै फुटबल खेलमा एक उदाउदा खेलाडीको मनोनयमा परेका छन् बेल्जियमका फुटबल स्टार एडेन हाजार्ड ।
२७ बर्षे यी खेलाडी हाल चरम प्रभावशाली खेलाडीको मनोनयमा परेका छन, १७ बर्षको हुदा बेल्जियम फुटबल टोलीमा प्रवेश गरेका यी खेलाडी हाल इंग्लिश प्रिमिएरमा चेल्सी क्लब मार्फत आफ्नो खेल खेल्दै आइरहेका छन् ।
अतिनै मनमोहक बल ड्रिब्लिङ्ग, रचनात्मक खेल शैली, तिब्र खेल र तिब्र खेल शैलीको निम्ति हाजार्डको नाम लिइन्छ र हाजार्डको यो स्थान यी नै खेल गुणले गर्दा पनि सम्भव भएको कुरामा फरक मत हुन्न ।
रेड्सका नामले परिचित बेल्जियम ऐतिहासिक तेस्रो स्थानको सम्भावनालाइ जिबन्त तुल्याउन सफल रेड्सका कप्तान हाजार्डको ठुलो हात रहेको पाइन्छ ।
तिन पटक विश्व कप फुटबल २०१८ मा म्यान अफ द म्याच घोसित हाजार्डको विश्वकप मा पर्दशन निकै लाजबाब थियो, यस पत्रकार, खेल प्रेमी लगाएत फिफाले समेत यी खेलाडीको ५ तत्वो माथि एस्तो प्रतिक्रिया दर्साएको छ ।
१ ) प्रेसरमा खेल :
आफ्नो आगाडी जस्तो सुकै प्रतिद्वोंदी किन न होस् हाजार्डको खेलमा कुनै बिग्न र बाधा हुदैन। उनको सित्तल खेल शैली र न हड्बडाई खेल पदर्शनले उनलाई उच्च स्थानमा ल्याईपुर्याएको छ ।
फुटबल उनको निम्ति ज्यान हो मनोरंजन हो जसले गर्दा उनि खेलमा जुन सुकै खेल र खेलाडीसंग मन लगाएर आफ्नो खेल खेल्ने गर्दछन जसको फलत उनमा हरेक प्रकारको प्रेसरसंग जुद्न् सक्ने क्षमता रहेको देख्न सकिन्छ ।
२ ) निरन्तर स्व मूल्यांकन :
घिसापिटा खेल अवस्था देखि माथि सर्दै आज आफ्नो खेल आफै मुल्यांकन गर्छन हाजार्ड , खेलको अवस्थासंगै आफ्नो मनोबल बढाउने साथै आफ्नो खेल कुन र कस्तो छ भने कुरामा आफै मुल्यांकन गर्छन ।
कम खेलाडीमा हुने यो विधि यी खेलाडीमा निकै भर पुर रहेको पाइन्छ । एक खेल पश्चात अर्को खेलमा परिवेशसंगै खेलमा सुधार ल्याउदै एउटा सर्ब खेल पस्कने प्रबिधि यी खेलाडीमा देख्न सकिन्छ ।
३ ) नेतृत्व भूमिका :
जसरी आज बेल्जियम सुनौलो युगका खेलाडीको भण्डार मानिन्छ, त्यो टिमका नेतृत्व भूमिका निर्बाह गर्दै आएका छन् यी खेलाडी । २७ बर्षे यी खेलाडीमा एउटा कप्तान बनेर टिमको ब्यबस्थापन गर्नुको साथै खेलमा नेतृत्वको उदाहरण पनि दिदै आएका छन् ।
आफ्नो खुट्टामा रहेको र खेलेको बल नै उनको टिमको लागि उदाहरण र खेलका निम्ति शैली हुने कुरा खेल प्रशिक्षक बताउछन । आफैमा सर्ब गुणी र कप्तानी भूमिकाका बादशाह हुन् भन्दै उनका प्रशिक्षक थप्छन ।
४ ) एन समयमा प्रभावकारी बल ड्रिब्लिङ्ग :
निकै महत्वपूर्ण र आखिर देखि पूर्ण समय हर समयमा एउटा प्रभावसाली बल ड्रिब्लिङ्ग शैलीले गर्दा उनि हर खेलाडीको लागि उदाहरण बन्न पुगेका छन् । हर समयका निम्ति उनले कहिँ न कतै खेलमा नया खेल सिर्जना गर्दछन जसको कारण रहेको छन् एन समयमा प्रभावकारी बल ड्रिब्लिङ्ग र बल माथि एक रुपता ।
उनको बल लिने र बल खेलाउने शैलीले दुनिया अच्च्मित त परेको छ नै साथै उनको तिब्र बल द्रिब्लले सबैमा खेलको स्वाद पुराएको देखिन्छ ।
५ ) परिपक्वता र जिम्मेवार :
सानो खेल होस् या ठुलो खेलो जो कोइ होस् हाजार्डको खेलमा जिम्मेवार खेल देख्न सकिन्छ, रेड्सका तर्फबाट टिमको जिम्मेवार पनि पाएका हाजार्ड निकै सहनशील का साथ् आफ्नो खेल खेल्दै एउटा खेलमा आफ्नो परिपक्वता पनि देखाउने गर्दछन ।
उनको खेलको स्थर कुनै खेलाडीसंग तुलना गर्न न सकिने विविध बताउछन । यो अवस्थासम्म आइपुग्दा विश्व का उच्च वोहोदाका खेलाडी मान्न सकिनेमा दुइ मत छैन ।
हाजार्डको स्पेन यात्रा तय, रियलले हाजार्ड भित्र्याउन कति खर्चिने
एडेन हाजार्ड:”मेरो सपना स्पेनबाट खेल खेल्नु छ”!! के हाजार्ड चेल्सी छाड्दै छन्!! जान्नुहोस
स्पर्स विरुद्ध चेल्सीको खेल हुदै !! हाजार्डले गरे समर्थकलाई आग्रह ?
करबो कप: हजार्डले डर्बीविरुद्दको खेल गुमाउने